सावधान ! झुकिएर पनि नराख्नुहोस् फेसबुकमा यस्ता गोप्य कुरा « Khabarhub
काठमाडौं– सामाजिक सञ्जाल फेसबुक नचलाउने को होला र अचेत ? प्राय मानिसले फेसबुक चलाइरहेका हुन्छन् । इन्टरनेट अनिवार्य साधन भइसकेको हुनाले यस्ता सामाजिक सञ्जालले कुराकानीलाई सजिलो र सस्तो पनि बनाइदिएको छ।
प्रकाशित मिति : २२ असार २०७६, आइतबार ६ : ५० बजे